Lọ Ọrụ Iwu na Jlọ akụ kacha mma
Iwu kacha mma na-ere ahịa n'ọdụ
Ndi Edere Ederede Banyere na Oke Edemede
Nke a bụ ndepụta nke kacha mma ma kacha atụ aro mbupụ ala ikike. Ọ dabara nke ọma, anyị emeela nnyocha sara mbara. Ya mere, anyị nwere ike ịnye ndụmọdụ na ndụmọdụ iji mee ka ọrụ gị dị mfe. Dị ka ndị a, mba ndị a nwere iwu nke nyere nchekwa nchekwa ego, nzuzo, dịrị mma ma na-enye nloghachi asọpụrụ na itinye ego.
Maka nkwụnye mbụ nke ihe karịrị $ 250,000:
OffshoreCompany.com ọkachamara na akaụntụ akụ na Switzerland na ikike ndị ọzọ. Yabụ, biko dejupụta fọm maka ịgba ajụjụ ma ọ bụ jiri otu ekwentị ekwentị dị na ibe a. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịga na ngalaba anyị dum na Swiss Banking.
Maka nkwụnye ego n'okpuru $ 250,000, ebe a bụ iwu ndị akwadoro:
Caribbean (ọtụtụ mba - kpọọ nọmba ekwentị dị n'elu maka nkọwa)
Caribbean na Belize (lee akara uhie
Banking Na Europe
Na mba ndị nwere ụtụ isi, nyochawa akaụntụ emepere dị ala. N’aka nke ọzọ, nzuzo dị elu. Na ikike Europe, agbanyeghị enwere nkwekọrịta ndị na-abawanye oke chọrọ nke ndị ụlọ akụ otu. Ya mere, ndị nwere ike ịbanye na akaụntụ kwesịrị iwepụta akwụkwọ ịchọrọ ịre ahịa karịa. Ha kpọrọ nkwekọrịta a European European Savings Tax Direction 2005.
Na December 2014, Council nke European Union nakweere Ntụziaka 2014 / 107 / EU. Nke a na-enye nkwado maka akụ / gọọmentị na nsogbu ụtụ isi ("Ntuziaka enyemaka nke EU”). N'ihi ya, ụlọ akụ na-akọ na ha nwetere mmasị na nkewa, yana ego ndị ọzọ na-edebe ego. Site na ya, mba dị iche iche na-ejikọrịta ozi ụtụ na mba ndị ọzọ.
Ntụziaka ndị a nwere ike imetụta nzuzo nke ichekwa ego na bank na ụfọdụ mba n'okpuru ya. Na mgbakwunye, EU Tax Direction nwere ike igbochi ihe nzuzo na nzuzo nke ndị na-edebe ego n'ụlọ akụ. Iji mee ka ihe doo anya, nke a na-emetụta naanị ụlọ akụ dị na mpaghara ndị dị n'okpuru iwu ndị a.
Mba dị n'okpuru Iwu Banking EU
Banyere ederede a, mba ndị so na European Union bụ ndị a:
Austria, Belgium, Saịprọs, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, na na United Kingdom. Na mgbakwunye na mba EU, ntuziaka ahụ gụnyere nkwekọrịta n'etiti EU na Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino na Switzerland.
Iwu ọ bụla nke so na ihe jikọrọ ndị mmadụ na-edo onwe ha n'okpuru EU Tax Direction. Na mgbakwunye, obodo ọ bụla dị n'okpuru ọchịchị, ma ọ bụ onye na-elekọta mba ndị a, dịkwa mma. Ndị ọzọ nwekwara ike iji obi ha kwenye, dị ka Switzerland na United States.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, 2014 bụ nkwekọrịta n'etiti mba ndị otu EU yana ndepụta nke mba ndị dị nso. Ya, akọwapụtara, na-enye ohere maka mgbanwe ma ọ bụ ozi azụmahịa. EU na-akpọ nkwekọrịta a “nhọrọ mgbanwe ozi nke akpaaka” yana akara ngosi nke Ntụzị.
Iwu ndị dịpụrụ adịpụ na-adịghị n'okpuru iwu EU ma ọ bụ ntụziaka anaghị esonye na nkwekọrịta a. N'ihi ya, ha na-enye ndị na-edebe ego iwu ndị ahụ ohere ịba ụba nke nzuzo.
Iwu kinglọ akụ ọzọ
Enwere ikike ikike ndị ọzọ dị na mpaghara ndị ọzọ nke na-enye ọtụtụ otu uru ahụ na ụdị EU na-arụ. Mana ha agbanyeghị na Ntụziaka EU. Ọ baghị uru ikwu, nke a na-abụkarị echiche dị oke mkpa maka onye itinye ego ma ọ bụ onye na-edebe ihe na-achọ nzuzo. Nke a bụ n'ihi na ịnwere ike ịchọrọ ụgwọ elele doro anya nke nwere ikike idebere mkpesa EU. N'ezie, nke a bụ nchebara echiche dị mkpa. Agbanyeghị, ịkwesighi iche ozugbo na ọ ga-akachasị mma ịchekwa ego na ngalaba na-anaghị achịkwa EU.
Ka e were ya na onye nwere ike itinye ego na ya ga-ezuru ego izizi nke mbu. O nwere ebumnuche banki ya na itinye ego ya na ikike ya. Ya mere, ebe oke osimiri dị n'akụkụ dịka Switzerland nwere ike ịkawanye mkpa ya. Agbanyeghị, enwere ikike tozuru oke na-adịghị n'okpuru Iwu Diretụ Isi EU. Ha nwere ike nwee nkwụnye ego izizi dị ala karịa nke ikike "ike". Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ikike dịka St. Vincent na Belize nwere ike ịchọ ka obere $ 2000 US ịmalite.
Ego esi agbanweela
Tupu mgbawa ịntanetị nke etiti-etiti nke 90 na mwakpo ndị omekome 9 / 11, ụwa ụlọ akụ dị mfe karịa. Dịka ọmụmaatụ, ndị nwere akaụntụ na ndị nwere ike itinye ego n'ụlọ akụ ndị dị n'ụsọ mmiri ga-enwerịrị banye n'ụlọ akụ. A choro nke a iji mepee akaụntụ. N'aka nke ọzọ, ha nwere ike iziga onye nnọchianya nyere ikike ime otú ahụ. Ha kwesịrị ịhazi ego, zụta ego, ma ọ bụ jiri aka ha mee nkwekọrịta. “Zọ “igbe mkpọchi na igodo” ochie siri bụrụ nke kachasị.
Agbanyeghị, kemgbe etiti narị afọ nke 90, agbanweela nnukwu mgbanwe. Enweela ntiwapụ na teknụzụ a na-ahụtụbeghị mbụ n'ọtụtụ ọrụ ọrụ n'ụwa niile. N'ezie nke a gụnyere ichekwa ego na ọdụ ụgbọ mmiri.
Onebọchị ga-apụrịrị n'ụlọ akụ. Ugbu a, ọtụtụ ọrụ dị ka kọntaktị kacha nso. Dị ka ị maara, anyị nwere uzo ụwa niile iji nweta akụkọ. Anyị nwekwara kaadị akwụmụgwọ dịka kaadị debit yana ọbịbịa ego enyefefe elektrọnik. Ọzọkwa, na mkpịsị aka anyị bụ akara aka anyị mebere eme, yana ịbanye na ịntanetị na-enweghị njedebe. Ya mere, agbanweela usoro iwu ụlọ akụ dị n'okirikiri n'ime ụzọ dị mfe maka ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ụlọ akụ gị dị na steeti Grand Canyon ma ọ bụ Grand Cayman. Ọtụtụ njirimara ndị ụlọ akụ na-enye bụ naanị akara òké. Ka anyị were ya na ị na-ezukọ ma na-agbaso usoro nlezianya niile ma naanị itinye aka na ọrụ iwu. Ọ bụrụ otu a, ihe nzuzo nke nkwụnye ego ma ọ bụ itinye ego ọ bụla siri ike dị ka o siri dị.
Ozi Banyere Banyere Ala Banyere
Ihe ndekọ ego bank rụọ ọrụ n'otu aka ahụ aka na akaụntụ akụ ụlọ. Banklọ akụ ahụ mepee akaụntụ ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, onye ahịa na-anata kaadị debit kaadị ma ọ bụ kaadị kredit. Ndị na-edebe ego na-abanye n’ accessntanet. Wire na-ebufe waya na ịrụ ọrụ ụlọ akụ na-ahụkarị dị mfe. Naanị banye na ntanetị ma soro ntuziaka ndị a. Bankslọ akụ ndị dị n'èzí na-enye ọtụtụ nke otu mma na ọtụtụ ndị na-enye nnukwu ndị ahịa ọrụ. Mgbe ị na-ahọpụta ụlọ ọrụ gị ọ dị mkpa ịhọrọ onye na-eweta ihe kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ gị.
Dịka ekwuru, ọtụtụ ụlọ akụ na-ahụ maka ịpụ ahịa ga-enye gị ohere ịtọ akaụntụ akụ site na itinye obere ka $ 2000. N'ọnọdụ ndị ọzọ, dabere na akụ, ịnwere ike itinye obere obere. Ọzọkwa, a na-ahazi ndị niile na-enye ihe ndekọ ego mba ofesi na-agbaso ma na-agbaso iwu nzuzo nzuzo zuru oke. Ihe ndekọ nkeonwe na-achọkarị nnabata izizi dị elu. Agbanyeghị, a na-eme ka ihe ndị ahụ dabaa na ebumnuche akaụntụ na atụmatụ dị.
OffshoreCompany.com nyochara ndị na-eweta ego na gburugburu ụwa. Anyị na-ahụ n'aka na ndị ahịa anyị nwere ike ịnweta akaụntụ ha site na ekwentị, faksị, email na Internetntanetị. Ọzọkwa, anyị na-eme ike anyị niile iji hụ na ha na-elebara mkpa ndị ahịa anyị anya. Gbakwunyere na anyị chọrọ ijide n'aka na anyị ka ndị nwere uche na ndị onwe anyị.
Mgbe ụfọdụ, ego ị ga-eji na-etinye ego n'ụlọ akụ ga-enweta oke mmasị. May nwekwara ike ịgwa anyị ka anyị guzobe akaụntụ azụmaahịa dị n’akụkụ mmiri. Mmasị na ntinye ego na-abụkarị nke ụtụ isi obodo na ikike nke ụlọ akụ. Ego ọmụrụ nwa na-adịkarị elu, ụgwọ ndị ahụ na-asọmpi. Ọtụtụ ụlọ ọrụ 500 na-azụ ahịa, gụnyere ụlọ ọrụ mmanụ na-erite uru nke ụlọ akụ dịpụrụ adịpụ. Offọdụ n'ime ikike ịnweta ụtụ isi a ma ama karịa nwere narị narị ụlọ akụ mbụ nwere ike ịhọrọ.
Institutionslọ ọrụ na-ahụ maka akụ na ụba na ikike nke onwe anaghị akọọrọ akaụntụ ndị ahịa banyere gọọmentị ndị si mba ọzọ. Ha anaghịkwa akọ akụkọ ya. Yabụ ọ dị n'aka onye nwe akaụntụ ime ya. Dị ka ụlọ ọrụ nwere ọrụ dịịrị, anyị nwere ike na-akwado gị ka ị soro ndị tax iwu ike ichoro ị bụ. Ọtụtụ mba, gụnyere ụtụ isi ego US na-enweta n'ụwa niile. Yabụ, anyị ga - ebu ụzọ nyere gị aka ịmalite ụlọ ọrụ gị na akaụntụ gị. Mgbe ahụ, anyị nwere CPA bụ ndị maara nke ahụ ma nwee ike inye aka na ntinye ụtụ isi maka ego ị nwetara na mba ụwa.
OffshoreCompany.com guzobere ọtụtụ puku usoro azụmahịa, akaụntụ akụ, nzuzo na atụmatụ nchebe akụ n'ụwa niile. Ichebe na ito ego nke ndi ahia anyi bu ihe anyi n’eche.
Institutionslọ ọrụ ụlọ akụ dị na mba ndị ọzọ na-enye ọtụtụ uru dị iche iche, mgbe a bịara na nzuzo Switzerland siri ike iti. Anyị enyewo ngalaba zuru ezu na Banyere ego na Switzerland ebe ị nwere ike ịmụtakwu banyere akaụntụ akụ nzuzo.
<Isi nke 10
Isi nke 12>